OEM ephathekayo 3 tier bamboo plant stand uMvelisi kunye Factory | Nero
Igama lemveliso: Indawo yesityalo esiphathwayo esinemigangatho emi-3 ye-bamboo
Ubunzima: malunga ne-2.5kg
Ubungakanani : 38.8 x 15 x 37.8 intshi ( L x W x H)
I-12 slat, iishelufu ezi-3, iiglavu ezi-1.
Isilumkiso: Umda wobunzima kwishelufu nganye, 30 lbs ezantsi kwishelufu 20 lbs mid kunye ne-15 lbs phezulu kwishelufu.
I-bamboo ehlala ixesha elide - Indawo yeentyatyambo yenziwe nge-5 YEARS yendalo ye-bamboo kwiintaba eziphakamileyo. Ihlala ixesha elide emva kobuchule bokubumba bobushushu obuphezulu. Ixesha eli-3 inkqubo yokupolisha kunye ne-Eco-friendly ivanishi yonyango yenza isiboniso seentyatyambo sime umphezulu ogudileyo, singangeni manzi kwaye kulula ukusigcina. Ifanelekile umboniso weentyatyambo ngaphakathi nangaphandle.
Uyilo olunomtsalane kunye noluSongekayo-Umbala wendalo we-bamboo ogqityiweyo wongeza imbonakalo entle neyothusayo kwizityalo zakho ezihamba kakuhle nemibala yendalo, kwaye ilingana naluphi na uyilo lokuhombisa ikhaya. Uyilo olusongekayo luqinisekisa ukuba lufanelekile kwaye lugcina izithuba
I-Multi-functional Application - Esi sakhiwo sesityalo singasetyenziselwa njengendawo yokugcina okanye i-shelf yokubonisa izityalo, izihlangu, izinto zangasese, iitawuli, izitya, izinto zokuhombisa ezininzi kwikhaya lakho okanye kwi-patio, njenge-shelving yezityalo, i-shelf yomququzeleli wokugcina, i-rack yomququzeleli wendawo yokuhlambela.
I-Practical Sturdy-i-Round comer kunye noyilo lwe-crossbar olusemva lukuzisela ukhuseleko olungakumbi ekusebenziseni; Isithuba esifanelekileyo se-crossbar siqinisekisa ukukhanya okulungileyo, ukungena komoya ngokupheleleyo kunye nokukhupha amanzi; Unyawo olungqingqwa kunye nezikrufu ezinentsimbi ziqinisekisa amandla okuthwala awomeleleyo.
Kulula ukuhlanganisana - iphakheji iza nencwadi yomyalelo ecacileyo kunye nesixhobo sokuFakelo kwiphakheji, Izixhobo ezongezelelweyo azidingeki.Ungagqiba ngokulula ukudibanisa ngokubhekiselele kwincwadana yokufakela. Imilinganiselo iyonke: 38.8 x 15 x 37.8 intshi ( L x W x H)
Uyilo lweNgcaciso eKhuselekileyo: Uyilo lwasemva olunqamlezayo luthintela ukuba izityalo zingawi. Kwaye i-design-out-out-out of the bottom layer iqinisekisa ukukhanya okulungileyo, kwaye inemisebenzi yokukhupha amanzi, ukuthintela i-rust kunye ne-ventilation, eyinzuzo ekukhuleni kwezityalo. Umphezulu ogudileyo kunye neekona ezingqukuva zikhusela usapho lwakho kwimikrwelo kwaye kulula ukuyicoca.
Okulandelayo: Nero bamboo ziplock umququzeleli yokugcina ingxowa